Fikarohana momba ny firaisana Henry Opukahaiia, mpanorina ny fiteny Hawaiian nosoratana sy ny famerenany azy tany Indonesia ho Handaka Vijjananda: Mpandika boky momba ny fivavahana-kristiana ary bodista, ao anatin'ny roa mianadahy.
Henry Opukahaiia, mpanorina ny fiteny Hawaiian nosoratana sy ny famerenany azy tany Indonezia ho Handaka Vijjananda: Mpandika ny boky ara-pivavahana-kristiana ary bodista, ao anatin'ny roa fiainana
Hita taratra amin'ny: Ny Fanahy Ahtun dia ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reyncarnation Ryerson-Semkiw
Tsindrio sary raha te hanitatra
Fiainana taloha ho an'i Handaka Vijjananda
Rehefa niasa tamin'ny boky boky Indonezianina, ateraka indray, nisy olona tiako hamaritana fiainana taloha. Ity olona ity dia Handaka Vijjananda, izay nametraka ny Foundationassiko Foundation, fikambanana miompana amin'ny fanaparitahana ny fahendren'ny Bodisma amin'io faritra io. Ny asasorany no nandika sy namoaka ny boky tany Indonezia. Nanana trosa aho Brenda ie-McRae, mpitsabo aretim-piainana taloha tao Jakarta, Indonezia, noho ny fanadinadinana ahy taminy.
Rehefa niara-niasa tamin'i Handaka aho dia hitako fa tovolahy manaitra izaitsizy izy. Voaofana amin'ny maha-parmasista azy izy, mitana orinasa fanondranana fanafody, raim-pianakaviana be fandavan-tena, nefa manam-potoana handikana sy hamoahana boky momba ny bodisma.
Ny olona dia mirona hanao hetsika mitovy amin'izany amin'ny androm-piainana iray hafa ka hatramin'ny hafa ary ireo izay manoratra boky amin'ny fahatongavana nofo matetika dia nanoratra boky tamin'ny fahatongavany ho nofo. Mora kokoa ny mitady ny androm-piainana taloha izay azo hamarinina ara-tantara ho an'ny mpanoratra, satria mamela rakitsoratra iray izy ireo. Araka izany, nanontany tena aho momba ny lasa iray lasa izay ho an'i Handaka.
Amin'ny fivoriana miaraka amin'ny Kevin Ryerson, Ahtun Re nilaza tamiko fa i Handaka dia nisy nofo nofo tany Hawaii, izay nandray anjara tamin'ny famoronana ny fiteny Hawaii an-tsoratra. Rehefa nanontany an'i Ahtun Re aho hoe ahoana no hahitako an'ity olona ity, dia nilaza tamiko izy fa fantatry ny tantara io olona io ary iray ihany ny olona toa izany.
Henry Opukaha'ia na Obookiah: Mpanorina ny fiteny Hawaii an-tsoratra
Nahita lahatsoratra mitondra lohateny aho, rehefa avy nanao fikarohana vitsivitsy. Henry Opukaha'ia: Ny tanora nanova an'i Hawai'i, nosoratan'i Betty Fullard-Leo, izay nanoratany:
"Ny asa Henry Opukaha'ia tamin'ny fandikana ny Baiboly sy ny fandraisam-peo ny fiteny Hawaii tao amin'ny fitsipi-pitenenana / rakibolana / tsipelina, nanokatra ny lalana ho an'ireo misiônera hanonta ny boky voalohany sy tantaran'ny Baiboly amin'ny fiteny Hawaii. ”
Nahita ny sarin'i Henry aho ary nanamarika fa nitovy tamin'ny an'i Handaka izy. Tamin'ny fivoriana iray nifanaovana tamin'i Kevin Ryerson dia nanontany an'i Ahtun Re aho raha i Handaka Vijjananda no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Henry Opukaha'ia. Ahtun Re dia nanamafy ny lalao.
Rehefa nampitaiko tamin'i Handaka ity fampahalalana ity dia nifandray tamin'ny lalao izy sy ny fianakaviany noho ny antony hazavaina vetivety. Andao aloha hodinihintsika kely aloha ny fiainan'ity mpisava lalana amin'ny fiteny Hawaii ity.
Fiainana tany am-boalohany sy fahaverezan'ny Henry Opukaha'ia tany Hawaii
Heverina fa teraka tamin'ny 1792 i Henry Opukaha'ia tao amin'ny Nosy Lehibe Hawaii. Tamin'ny naha zazalahy kely azy dia nihalehibe izy tao anaty korontana sy ady taorian'ny fahafatesan'ny mpitondra foko taloha, Alap'i. Ny mpandimby azy, Kamehameha, dia lasa mpanapaka ny Nosy Hawaii rehetra, fa niditra tamin'ny ady tamin'ny fifehezana ny Nosy Lehibe.
Tamin'ny ady nifanaovan'ny ankolafy mpanjaka mpifaninana dia novonoina ny ray aman-drenin'i Henry. Taty aoriana dia natsangan'ny dadatoany izay pretra na "tohunga" izy. Namoy nenitoà iray izy taty aoriana noho ny fanitsakitsahana “kapu” ara-pivavahana, izay midika hoe fady na fitsipika ara-pivavahana tsy azo ravana. Betty Fullard-Leo mitantara ny fihodinan'ny hetsika:
“I Henry, izay heverina fa folo na roa ambin'ny folo tamin'io fotoana io, dia nandositra ireo mpiambina nitazona nitondra ny rahalahiny kely teo an-damosiny. Ny lefona natsipin'ny iray tamin'ireo miaramila no nahita ny marika, ary novonoina ilay zazalahy kely. Tafavoaka velona i Henry, fa ilay miaramila namono ny ray aman-dreniny ihany no lasa mpiambina azy nandritra ny herintaona sy tapany.
Nandritra io fotoana io dia hitan'i Henry fa ny dadatoany no mpisorona ao amin'ny tempoly akaiky iray, ka navela handeha hiara-monina amin'ny renibeny sy io dadatoany io izy. Raha namangy ny nenitoany tao amin'ny vohitra akaiky iray izy, dia tonga ny miaramila haka azy ho an'ny fandikan-dalàna sasany, saingy tafavoaka tamin'ny lavaka tao amin'ny trano ahitra indray i Henry. Raha nijery izy, dia natsipin'ny miaramila iray tamina hantsana ity renibeny ity mba hahafaty azy. ”
Nandeha sambo ho any Connecticut i Henry Opukaha'ia tamin'ny “Fandresena”
Mampalahelo fa Henry, kamboty noho ny adim-poko, dia voatery nahita herisetra fanampiny be dia be. Tsy takatra ny antony naniriany ny handao an'i Hawaii ho any amin'ny toerana milamina kokoa. Rehefa nisy sambo iray nantsoina hoe Triumph tonga tao amin'ny seranana, ny kapiteny, lehilahy iray nantsoina hoe Brintnall, dia nanasa an'i Henry sy Hopo'o, zazalahy Hawaii iray hafa, hisakafo hariva ao anaty sambo ary handany ny alina.
Taorian'izay, Henry, tamin'ny faha-16 taonany, dia navela hijanona an-tsambo ary handray anjara amin'ny dian'ny sambo. Momba ny diany an-tsambo Triumph, Manoratra i Betty Fullard-Leo:
“Nantsoin'ny tantsambo hoe Opukaha'ia Henry izy ary nanoratra ny anarany farany tamin'ny fomba nanononany azy hoe Obookiah. Nandritra ny roa taona manaraka dia nandalo an-tsambo i Henry Triumph mankany amin'ny Seal Islands (eo anelanelan'ny Alaska sy Japon), miverina any Hawai'i, hatrany Macao, ary manodidina ny Cape of Good Hope, miantsona any New York tamin'ny 1809. Tao anaty sambo no namolavola finamanana tamina tantsambo kristiana antsoina hoe Russell Hubbard izay nanomboka nampianatra an'i Henry hamaky teny sy hanoratra, ka matetika no nampiasa ny Baiboly ho boky voalohany. ”
Rehefa tonga tany Etazonia ny sambo dia nifindra tany New Haven, Connecticut i Henry, hipetraka miaraka amin'ny Kapiteny Brintnall sy ny fianakaviany. Tao no nanohizany ny fianarany sy ny nianarany momba ny fivavahana kristiana, izay hitany fa mahaliana kokoa noho ny fivavahany Hawaii, izay ivavahana amin'ny sampy. Nandritra ny fotoana iray dia nipetraka niaraka tamin'ny fianakavianan'ny filohan'ny Kolej Yale izy. Niasa tamin'ny toeram-piompiana tany Connecticut sy New Hampshire izy, na dia nanohy nianatra aza raha azo atao.
I Henry no niova ho Kristianisma ary nandika ny Baiboly ho amin'ny teny anglisy
Tamin'ny 1814 dia nanomboka niresaka ampahibemaso tamin'ny vondrona fiangonana tany Connecticut i Henry. Ankoatr'izay dia nanomboka nandika ny Baiboly tamin'ny fiteny Hawaii izy ary namorona rakibolana sy boky fitsipi-pitenenana amin'ny fiteny Hawaii. Fullard-Leo, ao amin'ny lahatsorany, manohy ny tantara:
“Ny olona tao Connecticut dia nanomboka niresaka ny fandefasana misiônera any amin'ny firenena vahiny-Hawai'i, indrindra, satria tanora Kristiana teratany (toa an'i Henry) no afaka nanamboatra lalana. Nanohy nameno ny sainy nanontany tamin'ny fahalalana tao amin'ny Yale College i Henry. Tsy vitan'ny hoe nanao latinina, hebreo, geometry ary jeografia izy, fa nanatsara ny teny anglisy tamin'ny fanoratana ny tantaram-piainany tamina boky antsoina hoe Memoirs of Henry Obookiah. Tamin'ny taona 1815 dia efa vitany ny nanoratra ny tantarany manokana ary nanomboka nitahiry diary izay nilaza ny tsipiriany momba ny finoany. ”
Tamin'ny faha-26 taonany dia maty i Henry talohan'ny nahafahany nody tany Hawaii mba hanaparitaka ny Kristianisma any amin'ireo nosy
Avy eo dia niroso tamin'ny fiofanana ho misiônera i Henry, mba hahafahany manaparitaka ny hafatry ny Kristianisma amin'ny Hawaii tanindrazany sy manerantany. Mampalahelo fa talohan'ny nanararaotany nandray anjara tamin'ny iraka dia voan'ny tazo typhus i Henry ary maty ny 17 febroary 1818. Mikasika ny fiafaran'ny fiainany sy ny fiatraikany dia nanoratra i Betty Fullard-Leo:
“Nanamarika tsiky avy any an-danitra ny mpanatrika. 26 taona izy. Anisan'ireo teny farany nataony ny 'Alloah o e'– nadika tao amin'ny memoirany hoe:' Ny fitiavako homba anao. '
Ny boky kely momba ny fiainany dia natao pirinty sy niparitaka taorian'ny nahafatesany. Nanentana aingam-panahy ny misiônera 14 mba hanolo-tena hitondra ny hafany ho any amin'ny nosy Sandwich. Ireo nandeha tamin'ny Thaddeus tamin'ny 23 Oktobra 1819, dia i Samuel Ruggles irery no nihaona tamin'i Henry nifanatrika. Ny asa nataon'i Henry tamin'ny fandikana ny Baiboly sy ny fandraketana ny fiteny Hawaii amin'ny boky fitsipi-pitenenana / dikanteny / fanoratana, no nahafahan'ny misiônera hanonta ny tantaran'ny Hawaii voalohany sy ny Baiboly amin'ny fiteny Hawaii.
Ny fatin'i Henry dia nalevina tao amin'ny fasana amoron-kavoana any Cornwall, Connecticut, izay nijanona nandritra ny 185 taona. Tamin'ny taona 1993, vondrona iray amin'ny taranany, notarihin'i Deborah Lee, no nitondra ny razana nody tany Big Island. Ny razana dia naverina nalefa indray tao amin'ny Fasan'i Kahikolu any Napo'opo'o, akaikin'ny Helodranon'i Kealakekua any Kona Atsimo. Takelaka takelaka iray no manamarika ny toerana, karakarain'i Ka 'Ohe Ola Hou, vondrona natsangana mba hitohizan'ny zava-bitan'ilay tovolahy mpivavaka be izay inoana fa ny Hawaii voalohany niova ho Kristiana - tovolahy iray izay ny zotom-pony no antony nahatonga ireo misiônera voalohany. Tonga tany Hawai'i tamin'ny 1820. ”
Ny fitoviana eo amin'i Henry Opukaha'ia sy ny Reincarnation, Handaka Vijjananda
Amin'ny tranga naseho Teraka Indray, voamarikay ny fomba ahafahan'ny predispositions, talenta ary fombam-piainana miverina avy amin'ny fahatongavan'ny nofo ho nofo iray hafa. Handaka Vijjananda dia mifandraika amin'i Henry Opukaha'ia noho ireo fitoviana maro misy eo amin'izy ireo, toy ny:
Fandikana boky masina: Niasa tamin'ny fandikana ny Baiboly amin'ny fiteny Hawaii i Henry. Handaka no nandika ireo lahatsoratra bodista ho amin'ny fiteny indoneziana.
Famoronana rakibolana fandikan-teny: i Henry dia voalaza fa namorona ny rakibolana voalohany na primer ho an'ny fandikan-teny anglisy / Hawaii. Handaka dia mamorona rakibolana fandikan-teny mitovy amin'izany hanamorana ny fanovana ireo lahatsoratra bodista voasoratra amin'ny fiteny Pali India ho amin'ny fiteny Indoneziana.
Lahateny ampahibemaso: Tahaka ny nanome lahateny ampahibemaso ho an'ny vondrona fiangonana i Handaka dia nanao fampisehoana ampahibemaso momba ny Buddhism sy ny fananganana ny toetrany i Handaka
Asa fitoriana: Nofanina hanao asa fitoriana Kristiana i Henry, na dia maty aza talohan'ny nanirahana azy ho misiônera. Nanao asa fitoriana nandritra ny taona maro i Handaka ary nanompo tao Aceh sy Medan, Indonezia vao haingana, izay nitrangan'ny tsunami tamin'ny 2004.
Nanamarika i Handaka fa ny fahasamihafana voalohany amin'ny vanim-potoana roa dia ny nanompoany ny Kristianisma tamin'ny fahazazany Henry, ary izy kosa dia nanompo ny Buddhism tamin'ny fahatongavany ho nofo. Izy koa dia manana fomba fijery manerantany sy ekena kokoa, izay mampiavaka ny olona mino ny vatana vaovao indray.
Reincarnation sy fanovana ny fivavahana
Ahtun Re dia nanambara fa ny fianakavian'i Handaka any Indonezia dia tonga nofo ihany koa tany Hawaii satria ny fianakavian'i Henry, izay fantatry ny sasany fa maty tamin'ny fomba mahery setra sy lozabe. Amin'ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray an'i Henry Opukaha'ia | Handaka Vijjananda, hitantsika amin'ny làlan'ny maha-olombelona microcosmma lasa mivoatra ara-panahy bebe kokoa.
Teraka tao amin'ny tany nisy ady ara-poko i Henry ary lalàna sy fady ara-pivavahana henjana. Ny famoahana fady dia mety hanenjika ary ho faty mihitsy aza. Nandao an'i Hawaii i Henry ary nanjary mpino ny Kristianisma, fivavahana iray mifantoka amin'ny famelan-keloka, fiantrana ary fanaovana amin'ny hafa toa ny nataonao taminao. Na eo aza izany, ny kristiana dia tafasaraka amin'ireo rafi-pinoana samy hafa ary ny ady dia miady amin'ny finoana samihafa. Amin'ny vanim-potoana ankehitriny, i Handaka dia mino ny Buddhism, izay manaja fangorahana ary mandray ny vatana vaovao indray.
Porofon'ny tanjona ny reincarnation, izay mampiseho fa afaka manova ny fivavahana, ny tanindrazana, ny firazanana ary ny firazanana amin'ny firazanana ho iray hafa isika, no loharano farany amin'ny fomba fiainana manerantany.
Antenaintsika fa hiparitaka manerana an'izao tontolo izao ny porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, hitondra fandriampahalemana sy fandeferana lehibe kokoa amin'ny planeta. Andao isika hisaotra an'i Henry Opukaha'ia | Handaka Vijjananda tamin'ny fanampiana nitondra porofo momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao any Indonezia.
Raha hijery ny tranga mitovitovy dia alao ny:
Raharaham-panahy momba ny Reincarnation mpitarikas
Porofon'ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny vatana vaovao
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana amin'ny endrik'i Henry Opukaha'ia | Handaka Vijjananda
Ny faniriana sy fahaizana taloha: Ny fitoviana eo amin'ny talenta sy ny zava-bitan'i Henry | Handaka dia noresahina etsy ambony.
Ny fanovana ny finoana sy ny tanindrazana amin'ny alàlan'ny Reinkarnation: Natsangana niaraka tamin'ny finoana Hawaii taloha taloha i Henry ary niova ho Kristianisma. Handaka dia tany Indonesia ary i Buddhaka dia bodista.